တာမွေရှိရောင်းရန်တိုက်ခန်းများ | iMyanmarHouse.com
တာမွေ ၁၅၃လမ်း ကျောက်မြောင်းတွင် မြေညီထပ်တိုက်ခန်းကျယ် ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10157939 အတွက် လဝန်းရှင် အိမ်ခြံမြေ ဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်း သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🙏🙏🙏...တာမွေ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင် လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တိုက်ခန်းကျယ် ပြင်ဆင်ပြီး ရောင်းပါမည်...🙏🙏🙏...
2,700 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10155256 အတွက် Aung Ta Khit Real Estate Service. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09763810191, 09445823005, 09699860804, 09763810191, 09445823005, 09699860804
Aung Ta Khit Real Estate Service. ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10149697 အတွက် မြင့်မြတ်ဆုအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10144489 အတွက် မြင့်မြတ်ဆုအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တာမွေ မေတ္တာညွှန့်ဈေးအနီးမှ မြေညီထပ် (ထပ်ခိုးပါ) တိုက်ခန်း အရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10140847 အတွက် Myanmar Ray Real Estate Agency သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
018375574, 018381990, 09775511777, 09771166385
Myanmar Ray Real Estate Agency ပိတ်ရန်
ကျိုက္ကဆံ အဆင့်မြင့်အိမ်ယာ တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10136265 အတွက် Myanmar Ray Real Estate Agency သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10127475 အတွက် Moe Myint Thu Realestate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
(12.5'x55')အကျယ်၊ တာမွေ၊ (၁၄၉)လမ်းကွန်ဒို ရှိ ပထမထပ် ရောင်းရန်ရှိ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10126335 အတွက် Land And Houses Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09252588440, 09252588442, 09252588443
Land And Houses Co.,Ltd ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10126113 အတွက် မြင့်မြတ်ဆုအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
435 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10125876 အတွက် Moe Myint Thu Realestate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်